‘अघिल्लो कार्यकालमा सुरु भएका काम अब पूरा गर्छु’ « Lalitpur Khabar
१२ जेठ, ललितपुर । कलाको नगरी ललितपुर महानगरपालिकामा दोस्रो कार्यकालका लागि चिरीबाबु महर्जन नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएका छन् ।
काठमाडौँ महानगरपालिकामा युवा अनुहारका रुपमा प्रमुख र उपप्रमुख निर्वाचित हुँदै गर्दा ललितपुरमा भने पाका व्यक्ति नै दोहोरिएका छन् । पहिलो कार्यकालमा महानगरमा भएका विकासका काम र सरल व्यक्तित्वकै कारण उनी पुनः विजयी भएका महानगरवासी बताउँछन् । उनै नगर प्रमुखसँग गरिएकोे संवाद ः
मैले अघिल्लो कार्यकालमा गर्न नसेकका कुरा खासै छैनन् । हामीले ९० प्रतिशत काम ग¥यौँ । गर्न नसकेको पनि हाम्रो कारणले होइन । विगतमा फ्लाइओभर बनाउने भनी अध्ययन भयो र यसको सम्भावना छ भनी अध्ययनले देखाएको छ । काठमाडौँमा जाइकाले माइतीघरबाट त्रिपुरेश्वरसम्मको फ्लाइओभर निर्माण गर्न अध्ययन गरेको थियो । उताबाट निर्माण हुँदा यता पुल्चोकको अशोक स्तूपाबाट एक दशमलव चार किमीमा फ्लाइओभर बनाउने हामीले योजना बनाएका थियौँ । उता अहिले त्यो बन्ने सुर छैन । हामीले हतारिएर बनाउँदा त्यसलाई लगेर जोड्ने ठाउँ छैन । त्यसैले फ्लाइओभर हामीले अहिले रद्द होइन स्थगित गरिएको छ । काठमाडौँले माइतीघर–त्रिपुरेश्वर खण्डमा बनाएमा हामी पनि बनाउन सक्छौँ ।
तपाईँले अघिल्लो कार्यकालमा जनतासँग गर्नुभएका सबै प्रतिबद्धता पूरा भए ?
विगत पाँच वर्षमा हामीले अतुलनीय प्रगति ग¥यौँ । उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा सबै आवश्यक बाटोमा ढुङ्गा र इँटा छाप्ने काम भयो । अब त्यहाँ काम गर्न ठाउँ नै छैन । त्यसको आवश्यकता चक्रपथभन्दा बाहिरी वडामा छ । नीतिमा परिवर्तन गरेर बाहिरी वडामा धेरै बजेट विनियोजन गर्र्ने योजना छ । केन्द्रीय, प्रदेशस्तर, नगरस्तरिय योजना बाहिरी वडामा दिएका छौँ । हिजोका नगरका वडाभन्दा बाहिरी वडामा बढी बजेट छुट्टाइनेछ ।
हामीले एकान्तकुनामा यातायात व्यवस्था कार्यालय नजिकै आकाशे पुल बनाउने भनी डिजाइन गरेका थियौँ । सडक विभागले हामीलाई अनुमति दिएन । विभाग आफैँले प्रत्येक एकएक किमीमा आकाशे पुल बनाइरहेको छ । अहिले उपत्यकाका आकाशे पुल अहिले चढ्दा र झर्दा थकाइ लाग्ने र हेर्दा नै नचढौँ जस्ता छन् । मेरो आकाशे पुलमा भ¥याङ र लिफ्ट दुवै राख्ने, कफिसप र शौचालय राख्ने अवधारणा थियो । त्यो नमूना सफल भएमा अरुतिर गर्ने योजना थियो ।
महानगरमा ठूला अस्पताल छन् तर सहरी गरिबले त्यहाँ जान सक्दैनन् । उनीहरुको स्वास्थ्यमा पहुँच कसरी पु¥याउनुहुन्छ ?
स्थानीय तहको स्वास्थ्य पूर्वाधार राम्रो छैन । कोभिडका कारण र ऐनको अभाव हुँदा धेरै प्रगति छैन । हामीसँग भएका स्वास्थ्यचौकी सशक्त बनाउनुपर्छ । महानगरमा सङ्घीय सरकारले स्वास्थ्यसम्बन्धी सहयोग गरेको छैन । कोभिडको समयमा देशका ६९० स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउन रु १०÷१० करोड दिँदा हामीलाई दिइएको थिएन । यहाँ ठूलाठूला अस्पताल छन् भन्ने सरकारको भनाइ छ ।
महानगरमा पहिले निर्वाचित भएर आएको आठ÷नौ महिनामा नै ल्याण्डफिल्ड साइटमा फोहर फाल्न पाइएन । यहाँँ पनि फोहर छरपष्ट भयो र गाली खानुप¥यो । त्यसपछि आफैँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामीले दक्षिणी भेगमा जग्गा अधिग्रहण गरेर काम अघि बढाएका थियौँ । महानगरको वडा नम्बर २१ र २२ मा हामीले छानेको जग्गामा त्यो काम गर्न हुँदैन भन्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पत्र पठाएकाले रोकिएको थियो । त्यो ठाउँ उडानको रुटमा पर्ने र फोहरले गर्दा चिललगायतका चराचुरुङ्गीले बाधा गर्ने प्राधिकरणको भनाइ थियो । गोदावरी नगरपालिकासँगमा कुरा भए पनि केही हुन सकेन ।
गएको कार्यकालमा महालक्ष्मी नगरपालिका र गोदावरी नगरपालिकालाई वातावरणीय सुधार परियोजना भनेर सहयोग गरिएको थियो । सम्पदा सुधार भनेर गोदावरी चापागाउँको गुठी भवन बनाउन सहयोग गरेका थियौँ । गोदावरी नगरपालिकाको कटुवाल दहमा मन्दिर बनाउन सहयोग गरेका छौँ । अहिलेसम्म गाउँपालिकालाई सहयोग गरेको छैन । भगिनी सम्बन्ध कायम भएको जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा वातावरण सुधारका लागि सहयोग परियोजना छ । महानगरले छिमेकी नगरपालिका र गाउँपालिकालाई सहयोग गर्ने ट्रेन्ड नै बनिरहेको छ । आगामी दिनमा हामी बजेट पुस्तिकामा समेटेर सहयोग गर्नेछौँ । रासस